Wufuud Maanta Ku Wajahan Magaalada Kismaayo Iyo Amniga Oo La Adkeeyay – DMS
HomeWararkaWufuud Maanta Ku Wajahan Magaalada Kismaayo Iyo Amniga Oo La Adkeeyay
Wufuud Maanta Ku Wajahan Magaalada Kismaayo Iyo Amniga Oo La Adkeeyay
6th October 2019 Zamiir M Ali
Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose ayaa Maanta lagu wadaa inay gaaran Wufuud kala duwan oo ka kala tegaya Magaalooyinka Muqdisho,Garoowe iyo Nairobi.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullahi Deni ayaa qeyb ka ah Mas’uuliyiinta la filayo inay gaaran Kismaayo,waxaana la sheegay in Jubbaland ay u soo diri doonto diyaarad gaar ah.
Sidoo kale Siyaasiyiin ku sugan Muqdisho iyo Nairobi ayaa iyagana kusii jeeda Magaalada Kismaayo,kuwaasi oo doonaya inay ka qeyb galaan Xaflada Caleemo-saarka Madaxweynaha dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe.
Qabanqaabada lagu soo dhaweeynayo Mas’uuliyiintan ayaa haatan ka socota Garoonka diyaaradaha Kismaayo,iyadoona Maamulka Jubbaland uu diyaariyay dadweyne farabadan oo ka qeyb qaadanaya soo dhaweynta Mas’uuliyiintaas.
Gelinkii dambe ee shalay ayaa waxaa gaaray Kismaayo Madaxweyneyaashii hore ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Xildhibaano ka tirsan labada Golle ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Xaflada Calmeemo-saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa lagu wadaa inay dhacdo 9-ka Bishaan oo ku beegan Arbacadda soo socota.
Ammaanka guud ee Magaalada Kismaayo ayaa Maanta siweyn loo adkeeyay,waxaana Wadooyin kasta la dhigay Ciidamo gaar ah oo ka tirsan Booliska Jubbaland.
Cali Khaliif Galaydh Oo Kusoo Wajahan Magaalada Muqdisho